अचानक तौल घट्यो ? यस्तो रोग लागेको हुनसक्छ - लुम्बिनी समाचार
अहिले धेरैका लागि टाउको दुखाईको विषय हो, तौल नियन्त्रण । कसरी आफ्नो तौल नियन्त्रण गर्ने ? कसरी मोटोपन घटाउने ? कसरी स्लिम हुने ?
तर, कहिले काहिँ अचानक तौल घटिदिन्छ । न डाइटिङ, न जिम । कसरी तौल घट्यो ?
अचानक तौल घट्दा मानिसको लाइफ स्टाइल पनि प्रभावित हुन्छ । भोक नलाग्ने तथा भरपुर निद्रा नलाग्ने जस्ता समस्याहरुको सामना पनि गर्नुपर्ने हुनसक्छ । यसबाट टाउको दुख्ने तथा थकानको महसुस हुन्छ । के कारणले यस्तो हुन्छ त ?
अचानक तौल घट्नुको एउटा कारण क्यान्सर पनि हुन सक्छ । डाक्टरका अनुसार क्यान्सर हुँदा शरीरको तागत कम हुँदै जान्छ । यसका कारणले शरीरको वजन घट्छ र शरीर पातलो देखिन थाल्छ । यसबाट ग्यास्टि्रक र प्यांक्रियाज क्यान्सरका अलावा फोक्सो, सिर, गर्दन र कालोरेक्टल क्यान्सर हुन सक्ने सम्भावना पनि हुन्छ । त्यसैले वजन घट्दा बेवास्ता नगरी तुरुन्त डाक्टरकहाँ जानुपर्छ ।
यसका अलावा दिमागको हाइपोथेल्मसबाट कार्टिकोट्रोपिन नामक हार्मोन निस्किन थाल्छ जसले भोक लाग्न दिँदैन । यसका अलावा दिमागले एडि्रनल ग्ल्यान्डलाई पनि संकेत पठाउँछ जसले हार्मोनलाई असन्तुलित गरिदिन्छ । यसले गर्दा भोक कम लाग्छ र खाना कम खाने गर्नाले वजन पनि घट्न थाल्छ ।
६. एड्रिनलको कमी
यदि शरीरले पर्याप्त मात्रामा कार्टिसोल उत्पन्न गर्न सकेन भने एडि्रनलको कमि हुन जान्छ । यसलाई एडिसनको बिमारी भनिन्छ । यो त्यही कार्टिसोल हो जुन स्ट्रेसका लागि जिम्मेवार हुन्छ । अधिक तनाव हुँदा कार्टिसोल अधिक उत्पन्न हुन्छ जुन एक सामान्य प्रक्रिया हो ।
तर, जो व्यक्तिहरुमा कार्टिसोल कम उत्पन्न हुन्छ उनीहरु तनाव सहन सक्षम हुँदैनन् । त्यसैले उनीहरु धेरै बिरामी पर्छन् । तीव्ररुपमा वजन घट्नु, चक्कर आउनु, हल्का महसुस गर्नु र कयौं प्रकारका इन्फेक्सन एडि्रनलको कमी भएको लक्षण हुन् ।